Mivavaka i Kristy mba ho iray ihany isika rehetra
"Mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko ary Izaho koa ao aminao,mba ho ao amintsika koa izy; mba hinoan'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy." - Jao. 17:21.
Ao amin'i Kristy irery ihany no fanantenantsika. Manana fandresena horaisin'ny vahoakany isan'andro Andriamanitra (...)
Amin'ny alalan'ny fanomezana omen'ny Tompo avy any ambony no hanolorany tahiry ampy ho an'ny olony. Tsy vitan'ny ray aman-dreny eto ambonin'ny tany ny manolotra toetra masina ho an'ny zanany. Tsy vitan'izy ireny ny mamindra ny toetrany ho an'ny zanany. Andriamanitra irery ihany no mahavita manova antsika. Nilaza tamin'ny mpianany i Kristy nanao hoe: "Raiso ny Fanahy Masina". Izany no fanomezana lehibe indrindra avy any an-danitra. Nifandray tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny Fanahy i Kristy, izay fanamasinana avy amin'ny Tenany ihany. Nofenoiny ny heriny izy ireo, mba hamaboan'izy ireo fanahy ho an'ny filazantsara. Rehefa izany dia velona ao anatin'ny talentan'izy ireo i Kristy, ary miteny amin'ny alalan'ny tenin' izy ireo. Nahazo tombontsoa izy ireo tamin'ny fahalalana fa any aoriana any dia mbola ho tafaray Aminy izy ireo. Tsy maintsy kolokoloin'izy ireo ny fitsipika napetrany, ary tsy maintsy manaiky hofehezin'ny Fanahiny izy ireo. Tsy tokony handeha intsony amin'izay lalana tiany izy ireo, na hiteny izay teny tiany hotenenina. Tokony hivoaka avy amin'ny fo nohamasinina ny teny izay ambaran'izy ireo, ary hipololotra avy amin'ny molotra nohamasinina. Tsy tokony hitoetra amin'ny fiainany feno fitiavan-tena intsony izy ireo; fa Kristy no tokony ho velona ao anatiny. Atolony azy ireo ny voninahitra izay nananany niaraka tamin'ny Ray, ka ho iray ihany Izy sy izy ireo ao amin'Andnamanitra. GCB, 1 Oktôbra 1899.
Tokony ho tsapan'ny tanora lahy sy vavy fa ny atao hoe iray ao amin'i Kristy no voninahitra ambony indrindra izay azony tratrarina (...) Atokàny ho an'ny Tompo ny zava-drehetra momba anao, ny toetra, ny vatana, ary ny fanahy. Atolory ho eo ambany fifehezan'ny Fanahy Masina ny hery rehetra anananao. - R11, 9 May 1899.